'गेम अफ थ्रोन्स' पुस्ताले महाभारतबाट यी कुरा सिक्न सक्छन् - उज्यालो पाटो
केहिले भन्ने गर्छन्, यो पुस्ता ‘गेम अफ थ्रोन्स’ पुस्ता हो । ‘गेम अफ थ्रोन्स’ पुस्ता भन्नुको अर्थ कसैले लगाएका थिए, यो पुस्ताले ‘गेम अफ थ्रोन्स’ लगायत पश्चिमा कुराहरुमा सबै थोक देख्छ तर हाम्रो पुर्विय दर्शनमा केहि देख्दैन । ‘गेम अफ थ्रोन्स’ को ड्रयागनलाई विश्वास गर्छ तर जटायुले रामको सेवा गरेको कुरालाई वाइयात भन्छ ।
यस्ता भनाइमा धेरै कुरामा सहमत हुन सकिन्छ र, केहिमा असहमत ।
एक पटक दुई जना फरक उमेर समुहका मानिसहरुको गफ सुन्ने मौका मिल्यो । एकजना अलिक पाको उमेरको मानिसले भन्यो, “गेम अफ थ्रोन्स” हेर्नेहरुले महाभारत पनि हेरिदिए राजनीति र पुर्विय दर्शनका बारेमा धेरथोर ज्ञान लिन सक्थे । त्योसँगै नैतिक शिक्षा र व्यवहारिक शिक्षाको लागि महाभारत भण्डार हो । तर, उ भन्दा कलिलो उमेरको देखिने युवाले भन्यो, “महाभारतमा भएका सबै कुरा गेेम अफ थ्रोन्समा छन् ।”
नयाँ पुस्ताका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । शब्दमा भने जस्तै नयाँ पुस्ता अर्थात ताजा पुस्ता, जसले पुरानो कुरालाई उति ख्याल गर्दैन, जसले पुराना कुराहरुको महत्वलाई कम आँक्न सक्छ र भन्न सक्छ कि अहिले जे कुरा छ, त्यसको समाधान वा प्रगति पुरानो कुराले दिनै सक्दैन ।
वास्तवमै त्यस्तै हो त ? सँधै नहुन सक्छ ।
सन्दर्भ महाभारतको भए पनि यहाँ महाभारतको सबै कुराहरुको व्याख्या गर्न सकिदैन । महाभारतको व्याख्या गर्न महाभारतको भन्दा ठुलो आकार र समय लाग्छ । महाभारतमा विश्वास गर्नेहरुले तर्क गर्छन् कि महाभारतमा मानव जीवनका हरेक प्रश्नहरुको जवाफ छ ।
त्यसमाथि महाभारतको एक अंश भागवत गीता संसार प्रसिद्ध छ ।
अहिले यहाँ भागवत गीताको बारेमा पनि लेख्न लागिएको होइन । महाभारत केवल भागवत गीताका लागि मात्रै प्रसिद्ध र विशेष होइन । महाभारतका हरेक पात्रहरुको आफ्नै विशिष्ट गुण छन् । त्यस्तै विशेष पात्र हुन्, विदुर ।
विदुर अर्थात दासी पुत्र । उनको जन्मको अवस्था पनि विशेष छ । उनको जन्मको विशेषताका बारेमा अरु कुनै लेखमा पढौँला । अहिले उनले प्रतिपादन गरेको नीतिका बारेमा कुरा गरौँ ।
विदुर भन्ने बित्तिकै विवेक हुन् । उनी संयमित, विवेकी, स्पष्ट, न्यायिक र महान व्यक्ति थिए ।
विदुर हस्तिनापुर राज्यको शीर्ष स्तम्भमा एक अत्यान्त नीतिपूर्ण, न्यायोचित सल्लाह दिने व्यक्ति मानिन्छ ।
महाभारत युद्धाअघि हस्तिनापुरका महाराज धृतराष्ट र विदुरबीच संवाद भएको थियो । खासगरी महाभारत युद्धपछिको परिणामप्रति शसंकित महाराज धृतराष्ट र विदुरवीच भएको संवाद नै विदुर-नीति हो ।
विदुर नीति आज हाम्रो मार्गदर्शन र उत्प्रेरणा बन्न सक्छ । धृतराष्टको प्रश्नमा विदुरले दिएका जवाफहरुले हामीले आफैलाई बुझ्न सक्छौं । जीवन र जगतप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउन सक्छौं ।
यहाँ तिनै विदुरको नीतिका केहि बुँदाहरु उल्लेख गरिएका छन् जसलाई अहिलेको पुस्ताले आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छन् ।
१. घमण्ड आफ्नै शत्रु
विशेष परिस्थति बाहेक आत्मप्रंशसामा रमाउँने मानिसहरु घमण्डी हुन्छन् । यस्ता मानिसहरुले हरेक समय आफ्नो तारिफ गर्छन् र आफुलाई अरु भन्दा बढि समझदार सम्झिन्छन् । आफुलाई श्रेष्ठ र अरुलाई निकृष्ठ सम्झिने यस्ता घमण्डीहरुको आयु आफ्नै घमण्डका कारण घट्छ ।
विदुर नीति अनुसार भन्न सकिन्छ कि मानिसले आफुलाई बुद्धिमान सम्झिनु खराब होइन तर अरु बुद्धिमान छैनन्, म मात्रै छु भन्नु चै खराब हो ।
२. लगामविहिन बोली
लगामविहिन बोली हुनेहरुले आफ्नै बोलीका कारण दुख पाउँछन् । अधिक र व्यर्थ बोल्नेहरुले समय समयमा बोली चिप्लिने गर्छ जसको नकारात्मक परिणाम हुन्छ । त्यसैले धेरै बोल्ने व्यक्तिले आफ्नो बोलीलाई संयमित राख्नुपर्छ । किनभने असंयमित बोलीले पनि आयु घटाउँछ ।
३. रिस आफ्नै नाशको कारण
रिस खा आफु, बुद्धि खा अर्को भन्ने उखान पनि छ । यो उखान कहिले देखि प्रचलनमा आयो भन्न सकिन्न तर विदुर नीतिमा रिसका बारेमा प्रस्टसँग भनिएको छ ।
विदुर नीतिका अनुसार रिस मान्छेको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । रिसाए पछि मान्छेले यस्तो काम गर्छ जसले उनको हानी गर्छ र दुःखी बनाउँछ ।
४. सुख र शान्तिका लागि त्याग र समर्पण
मानिस बाँच्नुको अर्थ के हो ? मान्छे सामाजिक प्राणी हो भने समाजमा सुख र शान्तिपूर्ण जीवनयापनका लागि मानिसमा त्याग एवं समर्पणको भावना हुन आवश्यक छ । जसको मनमा त्यागको भावना हुँदैन, उनीहरुको आयु छोटो हुन्छ ।
५. लोभ र स्वार्थ शत्रु
असाध्यै धेरै अवसरवादी हुनु र लोभी हुनु हानिकारक हुन्छ । यसैले लोभ र स्वार्थलाई व्यक्तिको शत्रु मानिन्छ । जो व्यक्ति आफ्नो मनमा स्वार्थ र लोभको भावना राख्छन्, उनीहरुको आयु कहिल्यै लामो हुँदैन ।
६. धनप्रतिको आशक्ति
धन चाहिन्छ तर धन मात्रै सबै कुरा होइन । धनप्रतिको आशक्तिले मान्छेलाई नर्कमा पुर्याउँछ । धनको पछि लाग्नु हुँदैन । किनभने धन स्थायी हुँदैन । र, धनप्रति आशक्त भएर गरिने कार्यहरु अपराधी तथा अरुलाई पिरोल्ने किसिमका पनि हुन सक्छन् । यसले मान्छे स्वयमलाई हानी गर्छ भने यसको असरमा व्यक्तिको परिवार वा समाजमा पनि नकारात्मकता नै देखिन्छ ।
७. इर्ष्या त्याग्ने व्यक्ति
इर्ष्या त्याग गरेका मान्छेको जीवन स्वस्थ्य हुन्छ । जुन दिन मान्छेले आफैभित्र कमजोरी देख्छ र त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न गर्छ, तब उनीहरु सफल बन्छन् ।
८. जीवन असफल पार्ने तीन दोष
परस्त्रीको स्पर्श, अर्काको धन हरण र मित्र त्याग । यी तीन दोष क्रमश: काम, लोभ र क्रोधबाट उत्पन्न हुन्छ । यसले मानिसको जीवनलाई दुखी बनाउँछ ।
९. क्षमा दिनु र गल्ति मान्नु
क्षमालाई कमजोरी वा दोष मान्नुहुँदैन । निश्चय पनि क्षमा परम बल हो । क्षमा निर्बल मान्छेको गुण हो र बलवान व्यक्तिको भूषण हो । यसैले आफुले गरेका गल्तिप्रति माफी माग्न वा अरुका गल्तिलाई माफी दिन सक्नु पर्छ ।
१०. दुखका ६ कारणहरु
इर्ष्या, अर्कालाई घृणा गर्ने, असन्तुष्ट, क्रोध गर्ने, शंकालु र पराश्रति । यी ६ प्रकारका व्यक्ति सधै दुःखी हुन्छन् ।
यीसँगै विदुर नीतिमा जीवनमा सामान्य लाग्ने तर अत्यन्तै व्यवहारिक ज्ञानका खजानाहरु छन् ।
आजको पुस्ता व्यवहारिकरुपमा चलाख छ । जानेको र बुझेको छ तर नैतिक रुपमा कमजोर छ । मान्छेको नैतिक धरातल कमजोर छ भने मानिसको उन्नति र प्रगति मात्रै होइन, जीवन र सन्तुष्टि पनि तासको घर जस्तो हुन्छ, जुन जति बेला पनि भत्किन सक्छ ।
विदुर नीति अहिलेका पुस्ताले पनि पढ्नै पर्ने कुरा हो ।
तपाईलाई यो लेख कस्तो लाग्यो ? हामी सकारात्मक सोच बढाउँदै नैतिक धरातलमा जीवनलाई उज्यालो पाटोतिर लैजानका लागि विभिन्न किसिमका लेख तथा रचना प्रकाशित गर्छौँ । हामीलाई तपाईले फेसबुकमा लाइक गर्न तथा हाम्रा लेखहरु सेयर गरेर सहयोग तथा प्रोत्साहन दिन सक्नु हुनेछ ।